Abakhiqizi beWebhu | I-Narrowtex
by I-DevNarrowTex	 December 15, 2014
I-Narrowtex ingenye ephezulu abenzi bewebhu ezinze eNingizimu Afrika, zithunyelwa emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Eminyakeni edlule inkampani izakhele igama eliqinile lekhwalithi ephezulu, insizakalo enhle kakhulu nezikhathi ezisheshayo zokukhiqiza.
Ama-webbings akhiqizelwa imininingwane yomkhiqizo futhi yonke i-batch iyahlolwa ukuqinisekisa ukuthi i-webbing iyahambisana. I-laboratory engaphakathi endlini ikulungele ngokuphelele ukuvivinya amandla okwephuka, ukuhambisana kombala, ukushesha kombala, ukuhlaziywa komkhiqizo, njll.
Ama-webbings asezimbonini asetshenziselwa ukwenziwa kwamakhola ezifuywayo, imithwalo, izikhwama zezandla, izicathulo, njll.
I-Pebble Weave Webbing
Bulk Bag Bulk
Ububanzi obugcwele bungatholakala ngewebhusayithi yethu www.kuvideo.com lapho ungabona khona imibala ehlukene, ububanzi namaphethini ebanga lethu elijwayelekile lemikhiqizo yokweluka indwangu. Siphinde sibe ngabakhiqizi be-webbing abahamba phambili ngokwezifiso futhi singaklama futhi senze noma iyiphi i-webbing kuzidingo zamakhasimende ngazinye.
Ukuxoxa ngezidingo zakho zokufakwa kwewebhu kabanzi sicela usishayele ku (+27) 36 352 3108. Uma uthanda, ungasithumela i-imeyili ku- narrowtex@narrowtex.co.za. Sizojabula kakhulu ukukusiza futhi silangazelela ukuzwa okuvela kuwe.